Download Umqeqeshi Wezindlebe Osebenzayo - Ukuqeqeshwa Indlebe Kwenziwa Lula Apk Latest Version App By Kaizen9 Apps For Android Devices
Cindezela U-Enter Ukufuna
Ikhasi Lasekhaya izinhlelo zokusebenza Imfundoumqeqeshi wezindlebe osebenzayo - ukuqeqeshwa indlebe kwenziwa lula
umqeqeshi wezindlebe osebenzayo - ukuqeqeshwa indlebe kwenziwa lula
Ukuqeqeshwa kwezindlebe kulula futhi kumnandi ngomqeqeshi osebenza kahle. ukudlala umculo ngendlebe.
Thwebula Apk (7.20 MB)
Ukuqeqeshwa kwendlebe kungaba lula futhi kumnandi! Ngendlela efanele.
Ingabe wena (noma omunye wabangane bakho) uke wafuna ukufunda ukubhalela noma ukudlala umculo ngendlebe?
Kubaluleke kakhulu kumculi ukwazi lokho okuzwayo. Indlebe enhle yomculo isiza uma uqamba, uhlaziya, urekhoda izingoma, noma udlala nabanye.
Kungenzeka ukuthi usuvele wazama izinhlelo ezahlukene ukufunda ukubona izikhathi noma ngisho nokuthola i-pitch ephelele. Kodwa-ke, nakuba izinhlelo ezinjalo zithuthukisa indlebe yakho, kodwa ingabe ungakwazi ukudlala noma iyiphi umculo ozwayo ngokushesha nje uma uyilalela?
Ake ucabange ukuthi ungayiqonda umculo ... Kufana nalapho umuntu ekhuluma nawe, awuzwa nje imisindo ejabulisayo, kodwa uyaqonda amagama nencazelo yawo.
Ngelinye ilanga ngathola uhlelo luka-Alain Benbassat olubizwa ngokuthi "Functional Ear Trainer" futhi selulokhu luyisebenzisa kusukela ngaleso sikhathi. Isekelwe endleleni yokuqeqesha indlebe ka-Alain ukuze ufunde ukuqaphela amathoni.
Umehluko omkhulu phakathi komqeqeshi we-Functional Ear and ezinye izindlela ukuthi ufundisa ukuthi uhlukanise phakathi kwamathoni kumongo womkhiqizo othile womculo. Uqala ukuqaphela indima (noma ukusebenza) kwetoni ngayinye kulokhu okhiye, okungafani kakhulu nokufana nendima yayo kwezinye izihluthulelo zesilinganiso esifanayo.
Futhi kuqinisekisiwe * ukuthi ubani ongathuthukisa kancane kancane leli khono. Akunandaba:
- ungubani - umqali ophelele kumculo noma umculi wezobuchwepheshe we-virtuoso;
- uneminyaka emingaki - ingane engu-3 noma umuntu omdala ongu-90 +;
- yiliphi ithuluzi lomculo olidlalayo (awudingi ngisho nokudlala eyodwa).
Imfuno kuphela ukuqhuba imizuzu engu-10 ngosuku.
Ngangijabule kakhulu ngalomqeqeshi wezindlebe ukuthi ngithuthukise uhlelo lwe-Android olusekelwe ku-Alain Benbassat indlela. Ngithemba ukuthi uzothola kuyasiza.
Landa lolu hlelo lokusebenza okwamanje, futhi ujabule ngokuqeqeshwa kwezindlebe zakho!
ukuthuthukisa ukukhuluma isiNgisi
k53 eningizimu ye-Afrika
d6 esikhulumi esikoleni
Imibuzo ye-k53 nezimpendulo
Izitshalo Zokutshala - Thola Izitshalo, Izimbali, Izihlahla Nokuningi
duolingo: funda izilimi mahhala
Papermate - Past Exam Papers - South Africa Matric
udemy - izifundo online
I-blinkist - amabhuku angabonakali
babysparks - imisebenzi yentuthuko kanye nezenzakalo ezibalulekile
ukuphakamisa - imidlalo yokuqeqeshwa kobuchopho
funda izilimi nge-memrise - isi-spanish, isi-German ...
babbel - funda izilimi
Izinhlelo Zokusebenza Ze-Android Eziphezulu